Legends yamaMaya |
Zilungiselele ukuba zikwazi ukuya kumaxesha amandulo yamaMaya nale Free osebenzisa Slots Gcina Oko Ufumane, yamaMaya Legend. Oku imizobo ezimangalisayo nokunikelwa 3 iindlela ukuphumelela. The Free osebenzisa Slots Gcina Oko Win konke malunga nokuqokelela iimaski ze lokuwina imali enkulu. Kule, kufuneka lokujikelezisa idayisi kunye nto kodwa luck ecocekileyo. I IWG yokudlala ababhekisi phambili ngabo emva ukuyila kunye nokwakhiwa kwalo mdlalo emangalisayo. Njengoko ngalinye igama labo, benza umsebenzi emangalisayo ekudaleni le Free osebenzisa Slots Gcina Oko Win.
Akukho nto ifana umdlalo olungileyo ukuba athuthe ukuba kwihlabathi elilandelayo. Ngoko ke, ulungele kwaye uqale ukudlala lo mdlalo win nangoko kunye ibhegi ngokwakho ezinye mabhaso ezinkulu.
Phonononga A Yehlabathi Elitsha With The yamaMaya Legends
A kukhethwe kwistibhiya ziye zasetyenziswa ekudaleni zonke iimaski apha. Kweenzingo ziye ziyilelwe ukuba zilungele umxholo slot ngokugqibeleleyo. Kweenzingo nga ingafani yi imibala yawo: luhlaza, luhlaza, purple yellow. Kokuba imisiwe ngokuchasene kwimvelaphi ihlathi kunye oningga isibhakabhaka bomvu, nemithi ngasemva. Slot lulodwa ludonga. Kwelinye icala kwekhusi ungabona dices ezimbini, enye black and white elinye phezu kwelinye icala wekhusi yitafile oqhubeka ukugcwala umbala kweenzingo njengoko hlalani batshabalale. I RTP nalo eliphezulu kakhulu, ukuya kufikelela kwinqanaba le 85.16%.
le Free osebenzisa Slots Gcina Oko Win has a Ukudlala elula kakhulu. Konke ekufuneka uyenze lokujikelezisa idayisi kunye iimaski phezu kwetafile kuya hlalani kutshatyalaliswa. Xa eqala, uya kucelwa ukuba ukucwangcisa wafaka ukubheja kwakho ngokucofa kwi + kwaye – ongakhetha. Emva koko uya nqakraza i Play ukhetho kunye umdlalo uza kuqala. Ezi dices ezimbini iza kubonisa uququzelelo ukusuka 1-6 ukuba ekupheleni ngalinye. Kweenzingo ukuba kubakho ngaloo uququzelelo ukufumana kutshatyalaliswa kunye nayiphi na enye imaski osecaleni into efana kutshatyalaliswa nalo wabatshabalalisa. Imiqolo of imibala kuzakugcina ukugcwala yokwanda kwenani iimaski. Xa uzalise ngokupheleleyo kumqolo omnye, uya kuvuzwa win yakho.
le Free osebenzisa Slots Gcina Oko Win kuba yonke into efunekayo ukuze abantu bathanda umdlalo efana nale. Huge edl olunokubakho, crystal yemizobo ecacileyo, imisindo emangalisayo kunye umdlalo umdla yiyo eyenza amavo yamaMaya omnye kakhulu ayidlaleki phakathi yokungcakaza.